25 Siyaabood oo lacag laguugu siiyo Qorista Faallooyinka 2022 | Lacag Degdeg ah
Bogga ugu weyn 25 Siyaabood oo lacag laguugu siiyo Qorista Faallooyinka 2022 | Lacag Degdeg ah
Qofna ma iibsado badeecad markii ugu horreysay isagoo aan hubin waxa isticmaaleyaasha kale ay ka yiraahdeen badeecadda. Tani waa sababta Dib -u -eegistu ay qiimo ugu leedahay sumadaha iyo shirkadaha badankood.
Shirkaduhu waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan kaliya si dib -u -eegis loogu sameeyo badeecadooda ama adeegyadooda.
Adigoo aan dhidid dhididin, waxaad si sahlan u eegi kartaa badeecad oo aad lacag ku heli kartaa. Maqaalkani wuxuu ku siin doonaa fahan ku saabsan 25 -ka siyaabood ee ugu sarreeya ee lagu helo lacag si aad u qorto faallooyin.
Maxaa Loogu Bixiyaa Dib -u -eegista?
Sida aad si guul leh ugu qori kartid Faallooyinka
Xirfadaha Qorista Wanaagsan
Siyaabaha Lacagta Loogu Bixiyo Qorista Faallooyinka
#3. Cad cad
#4. Abuur Blog kuu gaar ah
#5. Cilmi -baarista Vindale
#7. Garsooraha Software
#11. Buug kasta oo Mawduuc ah
#18. Toostada Bulshada
#19. Dib u Eeg
#21. Codka Qiimaha Leh
Lacag ku hel si aad ugu qorto Faallooyinka Amazon
#25. Kooxaha Facebook ee Gaarka ah
Waxaan maqlay qof weydiinaya, maxay dadka ama ururrada u bixiyaan dib u eegista? Ma waxay haystaan ​​lacag badan oo ay rabaan inay tuuraan ama waa maxay?
Laakiin runtu waxay tahay in Dib -u -eegiddu ay qiimo leeyihiin maxaa yeelay waxay ka mid yihiin qodobbada ugu sarreeya ee go'aaminaya. Tusaale ahaan, ma xasuusan kartaa inaad badeecad ka iibsato Walmart ama Amazon adigoon hubin dib -u -eegisteeda?
Taasi waa waxa aan ka hadlayo!
Tani waa sababta shirkadaha badankood ay u bixiyaan lacag aad u badan dib u eegista. Intaa waxaa dheer, qaarkood waxay ku siiyaan alaab lacag la'aan ah halka kuwa kalena ay ku siiyaan lacag caddaan ah.
Qoritaanka dib u eegis guuleysta waa habka kaliya ee lagu kasbado. Marka dib u eegistaada aan la aqbalin waxay u fiican tahay inaadan wax qorin gabi ahaanba sababtoo ah lacag laguma siin doono.
Markaad wax qoraysid, waa inaad tixgelisaa waxa akhristahaagu jecel yahay. Sidoo kale, waa inaad isticmaashaa qaab qoraal oo soo jiidasho leh. Si aad u gaarto waxyaalahan oo dhan waa inaad haysataa waxyaabaha soo socda:
Waa inaad leedahay xirfado qoraal oo wanaagsan. Halkan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato naxwaha saxda ah, higaada, xarakaynta, heshiiska falka, qaabka jumlada, iwm.
Sidoo kale, dib u eegistaadu waa inay noqotaa mid kooban oo cad. Lahaanshaha qaab qoraal oo fudud oo soo jiidasho leh oo runtii ku caawinaya.
Tani waa mid aad muhiim u ah. Waa inay jirtaa meel loogu talagalay daacadnimada iyo runta dib u eegistaada. Ha ku qorin waxa akhristayaashaadu rabaan inay maqlaan. Daacad noqo oo bixi dhaleecayn wax dhisaysa haddii aanad jeclayn badeecad ama adeeg.
Been sheegida waxay ka dhigi kartaa oo kaliya akhristayaashaada inay lumiyaan kalsoonidaada.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lacag laguugu siiyo dib u eegista qorista. In kasta oo qaarkood aysan sharci ahayn, haddana waxaa jira qaar sharci ah.
Halkan, waxaan ku dejinay qaar ka mid ah aaladaha sharciga ah ee bixiya kharashka dib u eegista. Sidoo kale, waxaan ku darnay isku xirka boggaga si uu kaaga caawiyo samaynta baaritaan degdeg ah. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato siyaasadaheeda, maamulkeeda, iyo shuruudaha Heshiiska.
Swagbucks waa mid ka mid ah bogagga ku siin kara dib u eegista qorista. Waxaad halkan ku kasban doontaa adiga oo ka jawaabaya sahannada internetka ee ku saabsan summadaha gaarka ah ama iska diiwaangelinta badeecadaha.
Sidoo kale, waxaad kasban doontaa dhibco adoo daawanaya fiidyowyada samaynaya hawlo kale. Xusuusnow, waxaad dhibcahaaga ugu wareejin kartaa koontadaada PayPal lacag ahaan ama u soo furan kartaa kaararka hadiyadda. Si aad wax badan uga ogaato madalkan, guji badhanka hoose.
Haddii aadan rabin inaad ku biirto Swagbucks, Inbox dollars waa beddelka. Boggan waxa uu ku siinayaa madal aad lacag ku samaynayso oo kaliya adiga oo qoraya faallooyin.
Si la mid ah Swagbucks, waxaa lagu siin doonaa lacag adiga oo ka jawaabaya sahannada internetka ee ku saabsan summadaha gaarka ah ama marka aad iska diiwaangeliso badeecadaha.
Marka laga reebo qorista faallooyinka, waxaad samayn kartaa lacag aad u badan adiga oo ciyaaraya ciyaaro, tixraacaya asxaabta, daawashada fiidiyowyada, ama wax ka iibsiga internetka.
Waxa ku xiga liiskayaga waa Slice the Pie. Kani waa mid ka mid ah kuwa xalaasha ah ee lagu bixiyo goobta dib u eegista ee adduunka.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Helo Lacag Badan Isla Markaad 18 Jirto
Bilawgii, Slice the Pie waxay ku bilaabatay sidii goob dhegaysi iyo qiimayn lacag lagu qaato. Hadda, waxaad ku kasban kartaa inaad qorto faallooyin ku saabsan heesaha aad halkan ka dhegeysatay oo aad lacag ku hesho.
Waxa xiiso leh, goobtani waxay isticmaashaa habka lacag bixinta PayPal oo ah mid ka mid ah hababka lacag bixinta ugu fiican.
Markaad abuurto baloog kuu gaar ah, waxaad qori kartaa faallooyin dul saaran oo lacag samee. Waxaad dib u eegi kartaa waxyaabo gaar ah, sida kamaradaha, qaybaha gaarka ah, qalabka guriga, ama dharka.
Dib u eegisyadu waa inay lahaadaan xidhiidho xidhiidhiya kuwaas oo kaa caawin kara inaad kasbato mar akhristaha balooggaga ku dhufo iyaga.
Guji kasta, waxaad heleysaa 10% komishan. Taas macnaheedu waa marka dad badani gujiyaan dib -u -eegistaada, ayaa lacag badan oo aad samaysaa.
Marka, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso si aad u hesho gujinno dheeri ah waa inaad hubiso inaad dhisto balooggaaga si aad u soo jiidato booqdayaasha. Si aad u abuurto balooggaaga maanta, guji halkan si aad u bilowdo.
Cilmi -baarista Vindale, waxaa lagu siin karaa lacag si aad u qorto dib -u -eegista alaabta. Halkan, waxaa laga yaabaa inaad ku sameyso sahan onlayn ah ama aad fikirkaaga la wadaagto ka dib daawashada fiidyowyada oo lacag lagu siiyo.
Marka laga reebo dib -u -eegista, waxaad kasban kartaa lacag aad u badan adoo akhrinaya emayllada xayeysiinta, ka helida lambarrada abaalmarinta bulshada Vindale, iyo tixraaca saaxiibbada.
Waxa xiiso leh, Cilmi -baarista Vindale waxay isticmaashaa nidaamka lacag -bixinta PayPal oo ah mid ka mid ah hababka lacag -bixinta ugu fiican.
Si aad isugu diiwaangeliso Cilmi -baarista Vindale, guji badhanka hoose
Kani waa ikhtiyaar kale oo aad ku dooran karto haddii aad rabto in lagu siiyo lacag si aad dib ugu eegto alaab kasta.
Stream Stream wuxuu ku siinayaa inaad ku qorto faallooyin ku saabsan hoteelada, maqaayadaha, moodada, ama elektiroonigga iyo kuwa kale oo badan.
Tani waa sida ay u shaqeyso:
Isdiiwaangeli, uga tag faallooyinka nooc kasta oo alaab ah oo aad codsato xiisaha dib u eegista shay gaar ah.
Marka codsigaas la oggolaado, waxaad dhammaystiri kartaa mashruuca. Qoraal ahaan, mashruucaagu waa inuusan lahayn sawirro laakiin waxaad ku dari kartaa qaar si aad ugu ekaato mid gaar ah.
Sidoo kale, ReviewStream waxay isticmaashaa nidaamka lacag-bixinta PayPal si la mid ah goobaha kale ee lacagaha ugu badan lagu bixiyo.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in dib u eegis Stream uusan aqbalin been abuur, qoraal liidata, ama faallooyin foolxun. Sababtan awgeed, waa inaad hubisaa in dib u eegista aad qorayso ay tahay mid sax ah oo sax ah.
Si aad ugu biirto Stream Stream, guji badhanka hoose.
Haddii aad inta badan isticmaasho alaab farsamo markaa waxaad lacag dhab ah ka samayn kartaa Garsooraha Software. Xaakimka Software waa mid ka mid ah siyaabaha lacag laguugu qoro si dib loogu eego faallooyinka onlaynka ah.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya goobtan iyo goobo kale oo aan kor ku soo sheegnay ayaa ah in Garsooraha Software uu diiradda saaro dib u eegista software -ka.
Dib u eegis ahaan, waxaad ka heli kartaa barnaamijyada softiweerka ah ee diyaarinta canshuurta, amniga khadka, xisaabinta daruuraha, howlaha xafiiska guud, iyo nooc kasta oo kale oo ah barnaamij software.
Waxaa lagu siin doonaa lacag si aad ula wadaagto fikradahaaga ku saabsan software -ka aad ku kortay si aad ugu tiirsanaato, ama aad khibrad taban kala kulantay.
Dib -u -eegid kasta halkan waxay u dhexaysaa $ 1 illaa $ 50 qiimayn kasta.
Capterra waa beddelka Garsooraha Software. Dhimashada ayaa ah in dhammaan dib u eegista aan la daabicin, taas oo macnaheedu yahay in dhammaantood aan la daabici doonin sidii barnaamij lacag bixin ah.
Laakiin marka dib u eegistaada la daabaco, waxaad heli doontaa kaarka hadiyadda lacag ahaan. Waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee ku saabsan boggan ayaa ah inaad ka soo biiri karto meel kasta oo adduunka ah.
InstaGC waa goob kale oo dadka siisa dib u eegista qorista. Marka laga reebo qorista dib -u -eegista, qofku wuxuu kasban karaa dhibcaha isagoo dhammaystiraya sahannada, daawashada fiidyowyada, wax -ka -iibinta onlaynka ah, iyo raadinta shabakadda.
Qodobbadaas waxaa lagu iibsan karaa lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda sida Amazon iyo Walmart.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan InstaGC waa in qof kastaa uu lacag samayn karo isagoo dhiibanaya fikirkiisa. Uma baahnid inaad noqoto blogger ama aad ku yeelato taageerayaal badan baraha bulshada ka hor inta aanad kasban.
Si aad wax badan uga ogaato InstaGC iyo sida loo qoro, guji badhanka hoose.
Kani waa goob kale oo lacag ku siinaysa inaad qorto faallooyin. Goobta Tryazon, waxaad u oggolaan kartaa inaad aragto oo aad dib u eegto alaabta si gaar ah ama adigoo martigelinaya xaflad.
XIDHIIDHKA: Sida Lacag Loogu Sameeyo Skyrim 2022 | Tilmaan Buuxo
Markaad is -qorto, waxaad awoodi doontaa inaad baarto oo aad dadka kale ka codsato dhacdooyinka hadda jira, iyo sidoo kale fursadaha daawashada shaqsiyeed, oo loo yaqaan TryaBox. Si aad wax badan uga ogaato Tryazon iyo sida loo qoro, guji badhanka hoose.
Kani waa lacag kale oo lagu qoro goobta dib -u -eegista buugga oo aad iska hubin karto.
Halkan, markaad is -qorto, waxaad heli doontaa martiqaad inaad dib -u -eegto buugga. Laakiin waa inaad doorataa inaad aqbasho martiqaadka iyo in kale.
Haddii aad aqbasho sahan, waa inaad qortaa dib u eegis oo aad ku dhejiso aaladaha, sida Amazon iyo Goodreads. Kor-u-kaca ku saabsan Buug kasta waa inaadan helin oo keliya waraaqo badan oo aad eegto laakiin aad sidoo kale hesho lacag.
Guji badhanka hoose si aad wax badan uga ogaato Buug kasta oo Mawduuc ah oo is -qor.
Haddii aad rabto inaad bilowdo baloog -boodh ama aad durba bilowday, BlogExpose waa hab kale oo laga yaabo inaad rabto inaad iska hubiso.
Tani waa goob wanaagsan oo loogu talagalay bloggers kuwaas oo runtii raba inay lacag ka sameeyaan internetka. Halkan, waxaad lacag ku samayn kartaa adiga oo ku qoraya qoraallo blog taageero ah.
Kaliya dhammaystir astaantaada oo bixi xiriirinta saddexda dib -u -eegid ee ugu dambeeyay. Intaas ka dib, fiiri adeegyada la bixiyo oo guji kuwa aad rabto inaad ku darto. Haddii ay ku siiyaan shaqada, waad daabacan kartaa oo buuxin kartaa isla sumaddii.
Dhinac kale oo halkan ku yaal ayaa ah in sida blogger ahaan, aad kula xiriiri karto baloogyada kale ee ugu sarreeya
Guji badhanka hoose si aad wax badan uga ogaato BlogExpose oo is -qor.
Lacag Lagu Siisto Ciyaaraha: Ugu Fiican ciyaaraha Ajandooyinka
E-Pinions waa mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan si loo qoro goobta dib u eegista buugga. Waxa ugu fiican ee ku saabsan boggan ayaa ah in lacag lagu siin doono mar kasta oo qof akhriyo dib u eegistaada.
Si aad u hesho dad badan oo akhriya faallooyinkaaga, kaliya qor qormada ugu fiican uguna saxsan badeecadda ka hor intaadan gudbin.
Taas, waxaad yeelan doontaa dad badan oo soo socda si ay u akhriyaan faallooyinkaaga. Si aad ugu biirto E-Pinions guji badhanka hoose.
Goob kale oo lagu siin karo lacag si aad u eegto buug waa NetGalley. Kani waa goob dib-u-eegayaasha buugga iyo akhristayaal kale oo xirfadleyaal ahi ay ka akhrisan karaan buugaagta ka hor intaan la daabicin, oo ah foomka galleyda elektaroonigga ah ama dhijitaalka ah.
Halkan, qorayaashu waxay ku siinayaan nuqulka buugga ay carruurnimadiisii ​​hore haysteen si ay si fiican ugu eegaan suugaantooda. Waxaad kaloo codsan kartaa dukumenti aad rabto inaad hesho oo aad dib -u -eegis ku qorto.
Guji hoosta si aad u booqato goobta oo iska qor
MySurvey waa goob kale oo runtii dadka siisa dib u eegista qorista. Markaad bixiso fikradahaaga iyo faallooyinkaaga noocyada iyo alaabada kala duwan, waxaad kasbataa dhibco.
Marka laga reebo qorista dib -u -eegista, waxaa lagugu kasban karaa sahan, daawashada filimada, cayaarista, iyo tixraacidda saaxiibbada.
Dhibcahaaga waxaa lagu soo iibsan karaa lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda. Kaararka hadiyaddan waxaa loo heli karaa tafaariiqleyaal caan ah oo kala duwan, sida Amazon, CVS, iyo Applebee. Sidoo kale, waxaad ku soo furan kartaa dhibcahaaga shahaadooyinka elektaroonigga ah iyo foojarrada.
Guji halkan si aad u booqato goobta kuna biir
FameBit waa mid ka mid ah lacag-bixinta ugu wanaagsan ee sharciga ah si loo qoro abka dib u eegista. App-kan waxa uu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka sooca boggaga kale ee qoraalka.
Halkaan, waxaad ku heli kartaa guji mawduucaaga, ha ahaato kanalkaaga YouTube, koontada Instagram, ama koontada Twitter.
Moreso, waxaad codsan kartaa deeqda nooca taageerada aad haysato iyo wax kasta oo aad rabto. Markaad dhammaystirto dallacsiintaada oo aad u qaybiso kuwa raacsan, xisaabtaada PayPal ama Checkout ayaa la bixin doonaa.
Qmee wuxuu kaloo noqon karaa beddel Swagbucks. Waxa kale oo aad ku kasban kartaa boggan markaad ku qorto dib -u -eegis summad kasta ama adeeg kasta.
Laga soo bilaabo boggan, waxaad sidoo kale lacag ku kasban kartaa adoo baaraya internetka iyo wax ka iibsashada internetka. Lacagtaada waad ka soo furan kartaa koontadaada PayPal ama waxaad ku soo furan kartaa kaarka hadiyadda.
Toostada Bulshadu waxay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan ee lagu siin karo lacag si aad u qorto dib -u -eegista alaabta. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad la wadaagto badeecada aad ugu jeceshahay astaantaada warbaahinta bulshada.
XIDHIIDHKA: Intee In le'eg Ayaad Kasban Kartaa Markaad Ku Jirto Lambarka Bulshada 2022
Halkan, waxaad ku kasbataa dhibco mar kasta oo uu qofku gujiyo, jeclaado, wadaago, ka hadlo, ama cabbiro. Sidoo kale, waxaad ku kasban kartaa dhibic adiga oo u sheegaya saaxiibbadaa wax soo saarka ugu fiican.
Blogger ahaan, ikhtiyaarkan ayaa mudan in la tixgeliyo. Hel Dib -u -Eegid waa goob kale oo ku siisa fursad aad lacag ku kasbato adoo qoraya faallooyinka iyo waxyaabaha ku jira baloogga.
Halkan, marka aad qorto dib -u -eegis ku saabsan badeecad kasta oo ka diiwaangashan madal oo aad ku dhejiso balooggaaga, lacag ayaa lagu siinayaa. Waa sida sahal oo kale!
Sidoo kale, madalkani wuxuu adeegsadaa nidaamka lacag -bixinta ee PayPal si aad ula soo noqoto dakhligaaga si toos ah koontadaada PayPal.
SeedingUp waa goob kale oo sharci ah oo aad ku qori karto faallooyin lacag. Halkan waxaad fursad u leedahay inaad lacag ka hesho balooggaaga, kanaalada warbaahinta bulshada, ama kanaalada fiidiyaha. Guji halkan si aad u booqato goobta kuna biir
Tani waa goob kale oo aad lacag ka samayn karto dib u eegista alaabada Blogs, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, iyo Facebook.
QuickRewards.net ayaa lacag ku siisa si aad fikradaada uga dhiibto badeecadaha iyo adeegyada astaanta. Marka laga reebo dib -u -eegista, waxaad sidoo kale ku iibsan kartaa onlayn, ciyaaro, dalabyo dhammaystiran, iyo daawashada fiidyowyo si aad lacag u hesho!
Lacag -bixinta waxaa loo diraa koontadaada PayPal, ama waxaad dooran kartaa kaararka hadiyadda sida ikhtiyaarkaaga lacag -bixinta. Waxaa jira in ka badan 50 ikhtiyaar oo kaararka hadiyadda ah oo la heli karo, meelaha sida Amazon, Walmart, Lobster -ka Cas, iyo Beerta Saytuunka.
Maxay ku fiican tahay madalku waa inaad ku bixin karto PayPal wax yar oo dinaar ah! Iyo, si aad u soo furto kaarka hadiyadda, waxaad u baahan tahay kaliya $ 5!
Iyada oo la adeegsanayo LinkFromBlog, waxaad lacag ku kasban kartaa balooggaaga, ku qori kartaa faallooyin, sahamin dhammaystiran, oo aad ra'yigaaga siisaa xayeysiiyaasha alaabtooda iyo adeegyadooda
Haddii aad raadineyso inaad lacag ku kasbato qorista dib -u -eegista, markaa kani waa madal aad ku biirto! Waxa ka dhigaya LinkFromBlog inuu istaago in kastoo ay tahay inay fursad siiso balooglayaasha daabaca waxyaabaha ku jira madal lacag la’aan ah, sida Blogspot.com ama WordPress.com (WordPress.org waa nooca lacag bixinta), halkii ay ka ahaan lahaayeen domahooda.
Markaa haddii aad ka mid tahay kuwa wax ku qora ee adeegsada baloog bilaash ah, ka dibna fiiri LinkFromBlog.
Sidoo kale, haddii aad saaxiibbadaada iyo asxaabtaada u sheegto madal, u -gudbin kasta oo aqoon leh, waxaad kasban kartaa $ 50!
Marka ay timaado wax iibsiga iyo iibinta online, Amazon waa hogaanka. Haddii aad raadinayso goob aad dib u eegis ugu samayso alaabta Amazon oo aad kasbato xoogaa lacag ah markaa eeg tan:
Tani waa mid ka mid ah goobaha aad ka heli karto lacag si aad u qorto faallooyinka alaabta Amazon. Fiverr waxay leedahay dhawaaq isku dhaf ah oo ka kooban dhammaan alaabada, buugaagta, iyo gig-galayaasha Amazon.
Kadib Fiverr waxaa loo yaqaanay madal u saamaxaysa tiro aad u badan oo iskood u shaqeysta inay lacag ku helaan iyagoo ku qoraya faallooyin been abuur ah Amazon. Tani waxay ahayd sababta ay Amazon ugu dacwoodeen ku dhawaad ​​1000+ dib -u -eegayaasha wax soo saarka Fiverr been abuurka ah waagii hore.
Waxaa ka mid ah meelaha aad ka heli karto lacag aad ku qorto faallooyinka Amazon, Kooxaha Facebook-ga gaarka loo leeyahay ayaa caadi ahaan isticmaala. Tani waa sababta oo ah xayiraadaha qaarkood ee Fiverr.
Kooxaha Facebook ee Gaarka loo leeyahay, marka aad bixiso jawaab celin togan ama qiimeyn wanaagsan oo ku saabsan badeecad kasta, waxaad ka heli doontaa badeecad lacag la'aan ah ama qiimo dhimis badeecadaas. Kooxaha qaarkood waxay u baahan yihiin in xubnahoodu noqdaan Amazon Iibiya, laakiin badankoodu ma yeelaan.
10+ Barnaamijyo sida Maalinta Nasiibka ah - Mar labaad Guuleysta
Haddii aad tahay blogger, milkiile ganacsi yar, ama qoraa, waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu siin karo lacag si aad u qorto dib u eegista. Waxaa lagu siin karaa lacag dib u eegista buug, fiidyow, alaab, ama xitaa goob.
Ku biirista mid kasta oo ka mid ah aaladaha dib -u -eegista, waxaad samayn kartaa lacag aad u badan. Haddii aad jeceshahay inaad dib u eegto badeecadaha, hadda waxaad haysataa 25 siyaabood oo kala duwan oo lacag laguugu siiyo bixinta khibradaada gacanta koowaad.
Tartamayaasha Salesforce Sannadkii 2022: Top 10 CRM Beddelka Salesforce
Barnaamijyada Golf -ka ee ugu Fiican sannadka 2022 | Faallooyin Buuxa
Kooxda Maaliyadeed ee Rock -gu Ma Xalaalbaa Mise Waa Been Abuur?
Dib -u -eegista TradeGecko | Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
10ka Shaqaale ee ugu mushaarka badan Macallimiinta 2022
Hawlgabku had iyo jeer waa dareen. Iyadoo qaar badan oo ka mid ah asxaabtaadii hore ay ku tebi doonaan adiga iyo saameyntaada, waxaad…